Cannabis Infuser License Zvikumbiro zveCannabis Edibles & Zvinwiwa
Mutemo unotii nezve Infuser Masangano e Cannabis Extracts mu Illinois?
An Revhisi yekutengesa inzvimbo inonyatsobatanidza iyo cannabis kukanyaira mune chigadzirwa kugadzira iyo cannabis-yakarongedzwa chigadzirwa. Zvivakwa izvi zvichapihwa rezinesi nebazi rezvekurima uye zvinoda kuzadzisa zvishoma zvinodiwa kuti uwane rezinesi rekushandisa.
Cannabis Extracts Dzimwe nguva Inogona Kuridza Uchi
Pazasi tinotarisa zvimwe zvezvinodiwa izvozvo. Isu zvakare tichaputira zvirevo zvakatemwa nemutemo kune avo vari kutsvaga kuisa marezenisi ekunyengedza masangano e cannabis.
Kubudiswa kweCannabis Infuser License
Pakutanga kwaChikunguru 2020, bazi rezvekurima richange rakapa kusvika makumi mana emvumo dzesangano. Izvo zvinoshandiswa zveizvi marezinesi zvichatanga kubva muna Ndira 40, 7 uye hwindo rekunyorera richavhara munaKurume 2020, 15.
Pakupera kwegore 2021, dhipatimendi rekurima richange rakapa mareensi anopfuura makumi matanhatu emasangano enzvimbo. Pamberi pezuva iri, dhipatimendi rinogona kutora mitemo ichachinja nhamba iyi.
Mamwe matanho angatorwa neDhipatimendi kuwedzera nhamba yevanonyorera marezenisi vanosanganisira. "Kugadzirisa kana kusimudza huwandu hweanonyorera marezinesi uye kushandura kana kuchinjisa marezinesi kunyorera maitiro ekupedza kana kubvisa zvipingamupinyi."
Zvimwe zvinhu zvishoma izvo iyo Dhipatimendi rekurima zvichacherekedza apo zvichawedzera kana kuderedza huwandu hweanonyoresa marezenisi anosanganisira:
Iko kune isina kukwana cannabis kana cannabis akaiswa zvigadzirwa kuti asangane nezvinodiwa zvevarapi ve cannabis varwere.
Kugoverwa kwezvigadzirwa zve cannabis kwakaputirwa hakugone kusangana nevashandisi vese vekurapa uye nevaraidzo
Yakave panjodzi yekuwedzera mamwe masangano ekunyengedza kana kutanga aya masangano mune dzimwe nzvimbo
Izvo zvekuchengetedza zvinetso zvakanyorwa mumasangano ese ekunyengedza
Shanduko mumutemo wemubatanidzwa unoda kuwedzerwa kana kuderedzwa kwemasangano ekukanganisa
Dhipatimendi rekurima harina simba rekubata nemasangano ekunze ekuwedzera.
Zvikumbiro zveshuwarenzi wesangano rinokanganisa zvichaitwa mumagetsi. Paunenge uchiendesa iko kunyorera, zvinotevera zvinodiwa:
Mari isingadzoserwe yekubhadhara chikumbiro. Kusvika muna Ndira 2021, mari iyi ichave zviuru zvishanu zvemadhora. Mushure meiyi zuva, dhipatimendi rekurima rinogona kuseta imwe mari yakakwira kana yakaderera. Iyi ada ichaiswa kune cannabis regulation fund
Iri zita repamutemo remushambadzi, kero yepamoyo, uye mazita uye akagadziriswa evose nhengo yebhodhi nevakuru vakuru
Ruzivo rwakazara ne, "ruzivo rwe chero nyaya yekutonga kana yekutonga umo chero yemakurukota makuru kana nhengo dzebhodhi dzemushambadzi."
(i) vakapihwa mhosva, vakatongerwa mhosva, vakaripiswa, kana kunyoreswa kana rezinesi kumiswa kana kubviswa, kana
(ii) akachengeta kana kushanda pabhodhi rebhizinesi kana risiri remubhadharo rakaburitsa mhosva, akabatwa nemhosva, akaripiswa, kana kunyoreswa kana rezinesi kumiswa kana kubvisirwa mari ”
Iyo inoshanda nemishandiro iyo uyo anonyengedza anotevedzera nekusanganisa maitiro ekutarisa, chirongwa chekuchengetedza, uye chirongwa chevashandi
Ruzivo muindasitiri ye cannabis, uye rondedzero inoratidza ivo vanoshandisa ruzivo mukushanda mukicheni yekutengesa kana muyemabhoritari umo zvigadzirwa zvakagadzirirwa vanhu zvinogadzirwa.
Chirongwa chakatsanangurwa pamusoro pekuti mutambi achabata sei zvido zvemagetsi, zvinodiwa nemvura, uye kutambisa tsvina
Dhipatimendi rekurima rinogona kuregedza kunyengedza sangano rekushandisa pazvinhu zvinotevera:
Munyoreri haana kupa zvese zvinodiwa ruzivo. Dzimwe nguva, “Kana Dhipatimendi rekurima rikagamuchira chikumbiro chine ruzivo zvisiripo, Dhipatimendi rekurima rinogona kupa chiziviso chekushomeka. "Munhu anenge achinyorera anofanirwa kunge aine mazuva gumi ekutanga kubva musi wekuziviswa chiziviso kuti atumidze ruzivo rwakakwana."
Kana munhu achikumbira akundikana kuendesa ruzivo rwakazara kunyangwe mushure meiyi ziviso, chikumbiro chinenge chisingakwaniswe.
How Canannis Infuser License Ichaendeswa
Dhipatimendi rekurima richanzi riuye nehurongwa hwekuti huwandu hwevanonyoresa vanokanganisa sangano rinoshanda. Vaya vanoshora nemapoinzi akakwirira vanozopihwa iyo infuser sangano marezenisi. Kuverengera kuchave kwakavakirwa paruzivo rwunopihwa sangano rekunyengerera, iro rese reti sangano, uye kujekeswa kwefomu rekushandisa.
Zvimwe zvinhu zvinofanirwa kufungwa nezvazvo zvinosanganisira:
Yakakodzera sei nzvimbo inotsanangurwa
Urongwa hwekudzidzisa kwevashandi kukodzera
Rekodhi-chengetedza uye chirongwa chekuchengetedza
Nzvimbo yekuenzana kwemagariro
Masangano ekunyengedza anoronga kuitawo nharaunda achapihwa mamwe mapoinzi. Sangano revanyengeri rinogona kuratidza shungu yavo yekuita nharaunda ne, "kutora chikamu mune imwe chete kana kupfuura, asi isina kuganhurirwa kune, zviito zvinotevera:
(i) kugadzwa kweiyo incubator chirongwa chakagadzirirwa kuwedzera kutora chikamu mu cannabis indasitiri nevanhu vangakwanise seVamiriri veMagariro evanhu;
(ii) kupa rubatsiro rwemari kunzvimbo dzekurapa zvinodhaka
(iii) kudzidzisa vana nevechidiki nezvekukuvadza kunogona kuitika kwekushandiswa kwe cannabis; kana
(iv) dzimwe nhanho dzinoratidza kuzvipira kunharaunda yemunyimi ”.
Rinzinesi rinogona kudzimwa here?
Ehe, department rekurima richange riine mvumo yekuramba kunyorera kana vachinge vanzwa kuti iye anenge asina kutevedza mafambiro uye zvinodiwa. Chikumbiro chezinesi chinogona kurambwa kana zvikaitika zvinotevera:
Zvese zvinodiwa zvinhu hazviendeswe
Kana iye anenge achikumbira haawirirane nemitemo yenzvimbo
Kana paine chero nhengo yedare uye maofficial officer ari pasi pemakore makumi maviri nemasere pazera
Kutanga Kubvumidzwa kweVakuru Shandisa Cultivation Center License Zvinodiwa
Cannabis Infuser Sangano Rokushandisa Zvinodikanwa
Zvimwe zvinhu zvinokanganisa masangano zvinofanirwa kuve nazvo zvinosanganisira:
Gwaro rakazara rinoita rinoteedzera maitiro ekutsvaga, iwo maitiro ekutarisa, kuchengetedza rekodhi uye chirongwa chevashandi
Chirongwa chekuchengetedza chinoshandiswa nesangano rekunyengerera chinofanirwa kuongororwa nemapurisa
Kugadziriswa kwezvigadzirwa zvechi cannabis zvakaomeswa zvichaitwa munzvimbo yakavharwa. Kuwanikwa kwenzvimbo ino kuchamiswa zvakare sekutsanangurwa mumutemo.
Zvigadzirwa zveCannabis zvakamisikidzwa zvinongozopihwa kune sangano rinogovanisa
Sangano revanyengeri rinorambidzwa kusarudza zvakananga kana zvisina kunangana mitengo painotengeswa kumasangano akasiyana anogovanisa. Zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa nemasangano ekunyengerera zvinofanirwa kuve zvemhando yepamusoro uye mutengo zvakafanana kune vese vatengi.
Pfungwa dzekupedzisira pane cannabis infuser rezenisi
Izvi zviri pamusoro ndizvo zvimwe zvezvinodiwa zvakatemwa nemutemo kune avo vari kutsvaga kuumba masangano ekunyengedza. Pachave nezvimwe zvinodiwa sezvo zvinhu zvinotarisirwa kuramba zvichichinja. Avo vanofarira kujoinha indasitiri iyi vanozofanirwa kuramba vachifambirana nezviri kuitika.
Kuti ubudirire, iwe unofanirwa kusangana ne cannabis Gweta ndiani anogona kukubatsira iwe kuti unzwisise zvese zvinodiwa kuti unyore rezinesi. Vanozove nechokwadi chekuti application yako inoenda kuburikidza nenguva yekutanga. Negweta, zvichave zvakare nyore kupfuurira kushanda mukuita maererano nemutemo.
Infuser rezinesi - iyo yaunowana kana iwe uchida kuita brownies kuti uwane purofiti muIllinois.
Hei, ini ndiri Tom - ndiwane neku googling cannabis Gweta uye kuenda kune yangu webhusaiti cannabis indasitiri gweta kuti ubvunze chero mubvunzo timu yako. Tine rezinesi rekunyengerera - chinyorwa nhasi - Illinois yakaita chimwe chinhu chakasiyana pane processor rezinesi kumadokero - isu tiri kungodzika zvakadzika pane izvi- saka namatira kutenderedza uye ini ndichakuudza nzira yekuwana iyo masevhisi evanogona kuvhiringidzwa pamusoro payo inosvika kune infuser rezinesi.
Saka nyorera, bvunza mubvunzo mune zvakataurwa, uye utipe magunun'unu uye Tarisira kukuona iwe Chitatu paPamutemo News - buut izvozvi, ngatinyurure muIncuser rezinesi.
Idhipatimendi reI Illinois re ag richaburitsa marezenisi makumi mana muna Chikunguru 40, uye mamwe makumi matanhatu naZvita 2020. Hatizive kuti mangani marezinesi achauya mushure me60 - asi zvinoita sekunge hapana miganhu nemitemo yakashandurwa nebazi re ag mushure izvo. Izvo zvinozoenderana nekugoverwa kwezvinhu zvakadaro zvakaswiswa kuti zvive zvakakwana - izvo zvandinofungidzira isu tichafanirwa kumirira toona kuti vatengi vako vanozvigadzika sei izvo. Uchatenga here?
Space Cake? Pot brownies? Akapfekerwa gummies, akaomeswa pipi - kana yegoridhe standard kwandiri ... Lagunitas nyowani THC-brau. HiFi hops - ikozvino muCalifornia, Colorado - uye pamwe na2021 - Illinois sezvaunoziva Lagunitas ine taproom munzvimbo yeChicagoland nzvimbo.
Chekucherechedza - rezinesi rekunyengedza ndiro rakachipa pane zvaro kana rasvika kune rezinesi mubhadharo unobhadharwa nenyika. Izvo 5 zvakanaka kunyorera, uye zvishanu kuhwina - ipapo pagore madhora zviuru makumi maviri ipapo.
Izvo zvinoshandiswa zvichange zvichizobuda muna Ndira wa2020, netariro isu tichawana mimwe mitemo - asi tinoona zvinhu zvakakosha mukushandiswa mumutemo iwowo.
Izvo hazvisi zvakasiyana kubva kune zvimwe cannabis rezinesi. Iwe unofanirwa kuita zvakawanda zvekuburitsa uye kuronga nezvekuti kambani ichaita sei, chengetedza marekodhi, chirongwa chevashandi, zvirongwa zvekuchengetedza uye kutarisa. Iwe unofanirwa kuburitsa chero hutongi hwekutonga kana kutonga, ive yazvino pamitero yako uye nerutsigiro rwemwana, uine kumashure macheki. Kuzivikanwa kwemunhu chero upi zvake ane anopfuura 5% rezinesi. Rondedzerawo tsika yako yebasa -
Apa ndipo apo Illinois 'mhando yehukama hwemagariro muindasitiri ye cannabis inoratidza huwandu hwevanhu -Amaitiro iwayo ebasa aifanirwa kuratidza kuti kambani yako inozivisa sei, kuroja, kudzidzisa - zvidiki, vakadzi, veterans, vakaremara uye vane maitiro akafanira ebasa uye kuchengetedzwa kwevashandi.
Kupfuurirazve - iwe unofanirwa kuratidza ruzivo mune kana bhizinesi maitiro ayo anosimudzira kupiwa simba muhupfumi munzvimbo isina kurongeka. Iyi mepu dzinogadzirisa hurombo hwemadhorobha mudunhu - dzinodzika dunhu uye mepu iri pamutemo pane webhusaiti yeDCEO. Iye anonyorera anewo makumi maviri muzana ezvikonzero zvavo zvichibva pavari kuva munharaunda yekuenzanisa vanhu.
Ipapo chishandiso chinodzokera kune nitty gritty yekufanirwa kweiyo infuser - ivo vanofanirwa kuburitsa ruzivo nezve nzvimbo yakavharirwa iyo nzvimbo iyo cannabis ichachengetwa. Iwe unofanirwa kutsanangura chiitiko chako uchishandisa kicheni yekutengesa kana kuti lab ichigadzira zvigadzirwa zvinoshandiswa nevanhu. Wobva waronga chero dhigirii kana zvitupa uye seyakafanira ruzivo iwe nechikwata chako muinayo mune aya ane chekudya nezvebhizimusi.
Ipapo iwe, sevasimudziri vekuchera iwe unofanirwa kutsanangura mamwe maitiro ezvakatipoteredza neyegirini kubatsira kuchengetedza simba mukambani yako.
Kuverengera kunoenderera mberi senge chenjera kunokura pamwe neepipi zvinopihwa kune:
Kukodzera kwenzvimbo - saka kana iwe uchifunga kuti uri kuenda kunodhura pane yako kituo - ingosiya kuedza. Ita shuwa zvaunoda kuita - chivakwa chakanaka, chakachengeteka, chine simba senge heck.
Kukodzera kwechirongwa chedzidzo yevashandi - wana ruzivo
Kuchengetedza uye rekodhi kuchengetedza mutemo - musana weindasitiri- zvakare inosanganisira 24 awa AV yekuongororwa.
Chengetedzo yechigadzirwa uye chirongwa chekutsvetera - aka ave nechokwadi chekuti iwe unokwanisa kukodzera madhiza nyore nyore uye bvisa nyevero dzeTC neyechiratidzo chevana.
Nzvimbo dzekuenzana kwemagariro
(madiki madhora--2% ezvakadaro) Zvimiti zvekushongedza, chirongwa chekusiyana, Illinois uye varidzi veteran & bhonasi nharaunda inosvika kune vatengesi.
Vanonyengerera vanogona kungova ne "zvigadzirwa zvakasviba" kana zvasvika kune cannabis - iyo inotsanangurwa nemutemo sekubvisa kwavanoda kupinza muzvigadzirwa zvavo.
Muchokwadi mutemo unorambidza vanopwanya simba kubva mukuita wekubvisa we cannabis ringira kubva mune cannabis ruva rinowanzotsanangura processor muindasitiri. (410 ILCS 705 / 35-25 (n)) -
Nekudaro, dhipatimendi reAg rimwe zuva rinogona kuvhura rezinesi re processor kuti riite zvinowedzera - sezvo mutemo wevanyengeri uchibvumidza izvozvo, asi kunze kwegedhi - iyo yakajairwa muenzaniso Infuser rezenisi haina chidimbu chinobvisa - nekuti iwe unoda craft grow licence - saka google izvo.
Asi kana iwe uchida kuita zvinoshamisa zvinhu neTC zvakaiswa mukati mazvo - inzwa wakasununguka kuda uye kunyorera kana kundishanyira kune cannabis indasitiri yegweta neku googling cannabis gweta kana "infuser rezinesi" uye ndinovimba iwe neni tiri kunakidzwa neLagunitas cannabis brew na 2022.